Febraayo | 2017 | marqaati
Arkiifiyaha Billaha: Febraayo 2017
MARQAATI OO KA WALAACSAN IN MAGACAABISTA RW CUSUB AY MUUJINEEYSO IN ISEBEDEL UUSAN DHICI DOONIN
Mogadishu, 24 Feb 2017 — Marqaati oo ah hay’adda keliya ee aan dawliga aheyn oo ka shaqeysa la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya, waxay ka walaacsan tahay u magacaabista Xasan Cali Kheyre in uu noqdo Raisal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya. RW magacaaban wuxuu saaxib dhaw la yahay shaqsiyaad wasaqeeysan oo ka tirsan dawladda sii baxeyso, gaar ahaan madaxweynihi hore oo ku kacay musuqmaasuq ba’an sanadki la soo dhaafay.
marqaati waxay hoggaamineysaa la dagaalnaka musuqmaasuqa Soomaaliya
marqaati Press Release on PM_so
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Febraayo 24, 2017 uu qoray Maxamed Mubarak.
Musuqmaasuq Bila Xuduud: Heerka Isla Xisaabtanka 2016 ee Soomaaliya
Sanadka 2016 waxay aheyd sanadka ugu xun ee islaxisaabtanka ee Soomaaliya iyada oo jileyaasha siyaasadda ay doonayeen in ay isticmaalaan hab walba ay ku guuleeysan lahaayeen doorashada dadban. Shaqaalaha rayidka ah iyo booliska iyo NISA mushaar lama siin7 bilood; sidoo kale ciidamada xoogga dalka waxaa mushaar laga joojiyay dhammaadki 2015; $100 oo ay gunno u bixiyaan dawlado Soomaaliya la saaxiibka ah ayaa ugu danbeeyay bilowgi 2016 da. Musharka oo aanan la bixin waxaa dheeraa, dawladda Soomaaliya waxay iibisay dhulalka dawladda, iyadoo ula dan leh in ay ku taageerto doorashada dad ka tirsan xisbiga talada haya iyo madaxweynaha.
Sidaasi awgeed, doorashada waxaa hareeyay musuqmaasuq baahsan. Marki ay ergooyinka diidaan in ay sameeyaan sida la amro waa la bedelaa, la cabsi geliyaa, ama la toogtaa sida ka dhacday labo doorasho oo kala ah Galmudug iyo HirShabelle. Waxaa intaa sii dheer in dad laga saaray tartanka kadib dhiig ay ku daadiyeen goobta doorashada ayaa loo oggolaaday in ay baarlmaanka ku soo biiraan kadib doorasho dhoodhoob ah oo loo qabtay.
Dhaca baahsan ee loo geeystay qasnadaha dawladda si loogu maalgeliyo ololaha doorshooyinka dadka qaar, amniga faraha ayuu ka baxay 2016. Ciidamad amniga burcadinamada ayay ka qeeyb qaateen si ay naftooda u maareeyaan, taasi oo aad u wiiqday amaanada dadweynaha dawladda kala dhaxeysay. Baad, dhac, dil, iyo jirdil ayaa ka mid ah inta kabadan 500 warbixino ay dadweynaha marqaati u soo gudbiyeen, intooda badan oo la xiriira ciidanka ammaana.
Maadaama uu doorashada dhammaaday, sanadka 2017 wuxuu arki doonaa musuqa heerka sare oo wax yar yaraada, cid walba ee guuleeysata. . Si kastaba ha ahaatee, musuqmaasuq aad u weeyn oo ah heer dhexe iyo heer hoose aya dhici doona marki uu bilowdo gargaarka baniaadannimada ah ee abaaraha loogu talo galay. Dad aanan mushaar qaadan bilooyin badan ayaa la dhihi doonaa mas’uul ka noqdo cunno qeybis. Haddii aanan la siinin waxa ay xaq u leeyihiin, kuwooda u fiican xitaa dhaca ayay ka qeeyb qaadan doonaan.
In kastoo 2017 ay tahay fursad musuqmaasuqa lagula dagaalami karo, maadaama musharraxiinta guuleeysan kara ay musuqmaasuq ayaa la dirireynaa dhaheen, waxaa loo baahan yahay in sare loo qaado ka qeybgalka dalbashada in daah furnaan iyo kormeer ay ku sameeyaan hawlaha dawladda hay’ado aan dawlo aheyn oo madax banaan. Taageereyaasha Somalia ee caalamiga ah waxaa saaran xil gooni ay oo ay u hayaan dadkooda si ay u ogaadaan halka ay ku baxdo canshuuraha dadkood laga soo qaado.
Haddii aanan musuqmaasuqa wax laga qaban waxaa kordhayo taageeri la’aanta iyo sharciyad xumida dawladda, taasi oo kordhin doonta amni darrida iyo qulqulka dhalin yarada ka carareysa urur argagaxiso oo dhan ah iyo dawlad tuugnimo ku dhisan oo dhan kale ah. Warbixinta oo dhammeystiran halkan ka aqriso: Marqaati Warbixinta Musuqmaasuqa 2016
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Febraayo 7, 2017 uu qoray Maxamed Mubarak.